Warmly Welcome: ဘ၀သက်တမ်းကို (၁၄)နှစ်ထိ ပိုရှည်အောင် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဘ၀၏နေထိုင်မှု
မသိသေးတဲ့ ဗဟုသုတလေးကို တင်ပေးတဲ့အတွက် ဖတ်ရတာကျေးဇူးပဲ အသိပညာတိုးတာပေါ့ ကိုဝင်းဇော်။ နောက်လည်းပဲ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေဗျာ......... ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ..........
၀င်းဇော်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Post လေးက လိုရင်းတိုရှင်းလေးဆိုတော့ သိပ်ပြီး ထိရောက်ပါတယ်။ အရက်ကိုပုံမှန် သောက်မည့်အစား အချိုနဲ့ အချဉ်ပါတဲ့ အသီးတခုခုကို ပုံမှန်စားလည်းရပါတယ်။ အရက်သောက်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်က ခန္ဓကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေ ပုံမှန်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Arobic Respiration (with oxygen) နှင့် Anarobic Respiration (အောက်စီဂျင်မပါ) ဆိုပြီးနှစ်ခုမှာ Anarobic Respiration အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Arobic Respiration အတွက်က ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြီး ရရှိနိုင်ပါတယ်။ Anarobic Respiration အတွက် အရက်ဟာ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် (ဆန်၊ဂျုံ၊ ပြောင်း၊ သကြား စသည့်) ကို အင်ဇိုင်း (တဆေး) တခုခုနဲ့ ကစော်ဖောက်ပြီး ပေါင်းခံထုတ်ယူခဲ့ရသလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို စားထည့်လိုက်တဲ့ ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်တွေဟာလည်း အစာအိမ်ထဲကထွက်လာတဲ့ အစာခြေ အင်ဇိုင်းတွေနဲ့ ကဇော်ဖောက်ပြီးတော့ Anarobic Respiration တွက် အဆင့်ဆင့် အစာခြေရင်းနဲ့ အရက်ဓါတ်ကို ပြောင်းပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်၊ အကယ်၍ စားလိုက်တဲ့ အစားအစာထဲမှာ ကဇော်ဖောက်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့ စပျစ်သီး၊ လိမ္မော်သီးတို့လို အချိုနဲ့အချဉ် တွဲပါတဲ့ အသီးတခုခုကို ပုံမှန်စားဖြစ်ရင် အရက်ကို ပုံမှန်သောက်တာနဲ့ ဘာမှမခြားပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးလိုမြဲခြင်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်အောင် နေချင်တဲ့သူတွေအတွက် ဒီမှတ်ချက်ကို စေတနာအရင်းခံဖြင့် ကုသိုလ် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
အစ်မရဲ့ ဖြည့်စွက်မှုဟာ Reader တွေအတွက် ပိုမိုပြီး ပြည့်စုံစေတဲ့ ကျန်းမာရေးအသိပညာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျေနပ်စွာ လက်ခံယူပါတယ်။
Complete now ! We, Buddhists can keep our five precepts in that way !:P